महाकालीमा जयसिंह धामीको शव खोज्न ड्रोनको प्रयोग गरेपछि यस्तो भेटियो ? – Dainik Sangalo
महाकालीमा जयसिंह धामीको शव खोज्न ड्रोनको प्रयोग गरेपछि यस्तो भेटियो ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ समय: १२:३१:२२
दार्चुला, साउन २५ गते । सुरक्षा निकायले महाकाली नदीमा बे,पत्ता भएका जयसिंह धामीको शव खोजी जारी राखेका छन् । नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी तथा भारततर्फ भारतीय एसएसबीले नदी छेउछाउ खोजी जारी राखेका हुन् ।
यही साउन १५ गते तुइनबाट नदी तर्नेक्रममा उहाँ बे,पत्ता हुनुभएको थियो । सुरक्षाकर्मीले व्यास गाउँपालिका–२ मालदेखि महाकाली नगरपालिकाको खलङ्गा क्षेत्रसम्म निरन्तर खोजी जारी राखेका छन् । सो घटनाका बारेमा सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले एक पटक ड्रोन क्यामरामार्फत शव खोजी गर्ने जनाएको छ ।
गत शुक्रबार पी,डि,तको परिवारसँग र नेपालतर्फको घटनास्थल निरीक्षण गरी फर्किएको टोली निरन्तर प्रतिवेदन लेख्न र सोधपुछ कार्यमा व्यस्त छ । “हाम्रो अनुसन्धान जारी छ, अहिले सुरक्षा समितिका सदस्य, घटनास्थल नजिकैका सुरक्षाकर्मीलगायतसँग सोधपुछ चलेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
Last Updated on: August 10th, 2021 at 12:34 pm